‘मागेको चिज पाउनेभए सबैभन्दा पहिले देहावसान भएका बुवा माग्थे’ « Khoj Raftar
‘मागेको चिज पाउनेभए सबैभन्दा पहिले देहावसान भएका बुवा माग्थे’
संसारमा बुवा मात्र यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ जसले आफ्नो बच्चाको लागि आफुले भन्दा सफलताको बढी हासिल गरोस् भनेर कामना गर्नुहुन्छ ।बुवा शब्द आफैमा पनि अर्थपूर्ण शब्द हो। संसारको हरेक कुनामा गएर खोजेता पनि बुबाको अर्थ एउटा सिङ्गो र अनुशासित र सस्कारी परिवारको रुपमा काफी छ । बुवा घरको जग हो परिवार को उज्यालो हो घरको मुल खम्बा हो ।
मेरो बुवा भन्नु हुन्थ्यो जिन्दगी जिउनका लागि दुइ तरिका सधै अपनाउनु भन्नुहुन्थ्यो । जे भैराख्या छ हुन दिनु र सहदै अगाडि बढ।
आफ्नो जिम्मेवारी आफैले पूरा गर आत्मको कुरा जसलाई त्यसलाई नबाढ्नु र जिन्दगीमा गल्ती भयो भन्दैमा कायरा भएर हिम्मत कहिल्यै नहार्नु भन्नुहुन्थ्यो आज मैले यी यादहरु पलपल सम्झियको छु।
बुवाले गरेको मेहनत राम्रोसँग देखेको छु बुवा बिहानै उठेर कोदालो , हलो फोरुवा बोकेर खेतमा खनजोत गर्न जानुहुन्थ्य । म भने भ्यागुतो जस्तो बुरुक्क बुरुक्क उफ्रेर साँझ खानेखाने बेला रोइकराइ पनि मीठो खान्थे । दिनभरी काम गरेर फोरुवाको बिड समातेर हात भरी फोका उठाएर पनि केहि हात मुख जोड्नको लागि पनि काम नगरी नहुने । तरपनि छोराछोरी को लागि सफलताको लागि कामना गरिराख्ने रहेछन।
आफ्नो सन्तान भन्दाभन्दै परिवारलाई सस्कारी रुपले मुर्तिमा राख्दाराख्दै बुढेसकालमा पनि नथाकेर पनि मरिहत्ते गरेर काम गर्नुहुन्छ । यति गर्दा पनि हामीले बुवाआमाको मुल्य र महत्व नबुझेका अन्तिममा बृद्धअवस्था भयपछि बृदाआश्रमा राख्ने काम स्वार्थिको मात्र हुन्छ ।
बुवा ! म सानो हुदा तपाइको काधमा चढेर ठुलो मान्छे बन्ने रहर कहिल्यै मेटिएन र तपाईंको छातीमा खुट्टा बज्रादै नाचेर हाँस्थे तर पनि त्यो दुखार्इलार्इ देखाउनु भएन। खुइलिदै गरेको कपाल अनि चाउरिदै गरेका गालाहरु र आँखाका आँसु बगेर कालाकाला डामहरु दिनप्रतिदिन देखिरहन्थे त्यो पिडालाइ सहेर पनि तपाईंले छोराको लागि निकै प्रयास गर्नुभयो । मेरो उमेर दिनप्रतिदिन बड्दै गएपछी मेरो घरबारको लागी पनि तपाईंले साउनभदौंको गर्मीमा केटि तर्फको घरतिर तपाईंले काम पनि गर्दिनु भो कहिले जाडो र कहिले गर्मीमा सदवाहार कसरी काम गर्नु भयो होला ?
मलाई अध्ययनको शिलसिलामा सहर नआइ नहुने थियो । तपाई देखि म छुट्टिनु परे अङ्गालोमा बेरिदै रोएको सम्झिदा करक्क मुटु खान्छ । तर पनि तपाईंले आँखाबाट आशु झार्दै ठुलो मान्छे अनि बिज्ञान मान्छे बनेर आइज भन्न्नु हुन्थ्यो त्यही तपाईंको बचनले मलाइ यति धेरै असर परेको छ । भक्कानियर अनि टोलाएर बसिराको हुन्छु धेरै उतारचढाव भएपछी बन्द कोठामा आयर रुने काम मात्र छ । यी कुराहरु दिनप्रतिदिन सम्झिदा सपनाहरू जस्तो पो लाग्छन त्यसैले संसारमा मागेको चिज पाउने भए स्वर्गबाट बुवा माग्थ्य । मान्छे प्रयोगमा हुँदा खेरी केहि पनि महत्व नलाग्ला तर उस्को सास पछि कसको मह्त्व कति रहृछ भनेर थाहा पाउन सक्नुहुनेछ । बुवाआमा जिवित हुन्जेल पिरोलिएर बस्नु पर्छ मरे पछि काजकृया गर्नु उचित होइन जिवित हुन्जेल जति सकिन्छ त्यति नै सहयोग गर ।
कोरोनाको मृत्यु अन्तरराष्ट्रिय घटना बन्ने, तर भोकको मृत्युले राष्ट्रिय चर्चा पनि नपाउने !
आज घोराहीका ३ सहित तुलसीपुरका एक जनाको मृत्यु
कोरोना संगै तड्पिएका कृषकहरु
आफुले मागेको होईन, दिएको मात्र लिनुहोस !!